Lisitry ny hevitra rehefa mamorona sary famantarana | Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | Graphic Design, Inspiration, Tutorials
Lisitry ny hevitra amin'ny fotoana mamolavola sary famantarana hahatonga ny marika hiasa tsara sy hahatratra mpampiasa maro noho ny a fifandraisana mahomby kokoa, tsy tokony hohadinointsika fa ny sarin'orinasa dia tsy maintsy mihetsika amin'ny fomba izay maneho ny maha-izy antsika tamin'ny fomba nitondrako tena toy ny akanjo fanaonay isan'andro.
Ao amin'io lahatsoratra Ho hitantsika ny tranga azo ampiharina amin'ny sary orinasa miaraka amin'ny fikasana hifehezana ireo fahalalana fototra ilaina amin'ny fotoana mamorona sary orinasaAmin'ity tranga ity dia hiresaka ity sary ity ohatra sy ny fifandraisan'ny hevitra ao ambadik'izany izahay.
Alohan'ny hanombohana ny famolavolana sary orinasa dia tsy maintsy mazava amintsika ny momba antsika sy ny inona inona no tianay hampitaina, Eto no ahitana ny dingana voalohany hamoronana sary sary. Rehefa avy nazava ny momba an'io dia rehefa afaka manomboka amin'ny ampahany sary, Alohan'ity dia ny ampahany teôria fotsiny no hataontsika.
1 FITSIPIKA HAMORANA ANJARA CORPORATE
1.1 Fantaro ny marikao
1.2 Mitadiava fifandraisana sy fifandraisana
1.3 Mamorona sarintany misy sary sy andinin-tsoratra masina
1.4 Mandika fiteny: manomboka amin'ny fiteny mifototra amin'ny hevitra amin'ny sary
2 DOKY KORPORATE IMAGE: FIANARANA TRANO
2.1 Inona no tokony asehon'ny sarin'ny orinasa Dox?
FITSIPIKA HAMORANA ANJARA CORPORATE
Fantaro ny marikao
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manoratra ny mampiavaka ny marika anay ary ataovy andiany iray manontolo izahay fanontaniana Manampy antsika hahalala ny maha-izy antsika izy ireo: inona no ataon'ny marika? Inona no ataony? Inona ny tanjony? Aiza no mihetsika ny marika?
Mitadiava fifandraisana sy fifandraisana
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia mitady fifandraisana amin'ny foto-kevitra amin'ny karazany rehetra izay afaka manampy anay hamantatra ny marika. Ilaina io ampahany io hanatrarana a fifandraisana mahomby miasa tsara: tahaka ny inona ny marika misy antsika? Manana sanda miavaka ve izy io? Azo ampifandraisina amin'ny marika efa misy ve izy io? Amin'ity lafiny ity dia hitady ilay fifandraisana izay havoarantsika amin'ny lafiny sary, ohatra, raha natokana ho an'ny tontolo ekolojika ny marika. hitady fifandraisana izahay ao anatin'ny tontolo maitso izy ireo. Ao amin'ity faritra ity ny fampiasana sary Manampy be dia be amin'ny fametrahana fifandraisana atiny sy fiasa mandaitra kokoa.
Un ejemplo mety ho ity:
Maitso ny orinasanay fa miaraka amina glamor. Amin'ity tranga ity dia hitady fifandraisana amin'ny tontolo maitso isika fa miaraka amin'ny tontolon'ny rendrarendra, raha adika sary dia mety toy izao: loko maitso + volamena. Amin'ny fomba fijery sary eny ampifandraisinay amin'ny sary izany hiresaka ravina, diamondra, volamena izahay ... sns. Mikasika ny fikarohana ireo fifandraisana ireo.
Mamorona sarintany misy sary sy andinin-tsoratra masina
fikarohana sary mifandraika amin'ny marikao ary mamorona sarintany hita maso hitarika anao tsara amin'ny fampivoarana ny sarin'orinasa. Ny sarintany hita maso manampy anay hiasa amin'ny fomba mora sy mora kokoa hatrany izy ireo rehefa manampy anay hamorona ireo fifandraisana amin'ny atiny ireo.
Mandika fiteny: manomboka amin'ny fiteny mifototra amin'ny hevitra amin'ny sary
Ny fiteny teôlôjika azo raisina adika amin'ny tontolon'ny plastika, Izy io dia tsy isalasalana fa ny tapany farany amin'ny tetik'asa famolavolana rehetra, satria tena ilaina ny fahitan'ny mombamomba antsika rehetra voahangy hatreto amin'ny fahazavana. Ny fanaovana an'io dia tokony hataontsika mitady fitoviana eo amin'ny fampahalalana teôria sy ny tontolon'ny sary, ny endrika ary ny loko. Ohatra, raha natokana ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny marika, dia tokony hieritreritra tsipika biolojika tsara isika izay mampihetsi-po ny hetsika, loko matanjaka izay mampita angovo ... sns. Ity ampahany ity dia tokony hanana foana sivana maro: Ohatra, raha lafo ny marika fanatanjahan-tena ataontsika, dia tokony hitandrina isika rehefa mampiasa loko tototry satria tsy mety amin'ny toerany.
DOKY KORPORATE IMAGE: FIANARANA TRANO
Ankehitriny dia ho hitantsika kely ny lalan'ny fampandrosoana ny sarin'orinasa DOX.
Dox dia fantsona an'ny Youtube fanolorana mpiasa famolavolana sy atiny kanto, ny tena andraikiny dia ny manolotra fitaovana audiovisual amin'ny alàlan'ny fampiofanana avy amin'ny lampihazo Youtube.
Inona no tokony asehon'ny sarin'ny orinasa Dox?
Momba izany toerana misy atiny be dia be: amin'ity tranga ity dia mifantoka amin'ny hevitra ny boaty na kaontenera izay mitahiry zavatra. Taorian'io, notadiavina ny fifandraisana amin'ny anaran'ny marika, ny hevitra momba boaty (boaty) amin'ny hevitra hoe dox (boaty famolavolana) amin'ny fanovana ny iray amin'ireo litera dia azo atao ny manome taratra izany endri-javatra.
Miaraka amin'ity fanovana tsotra ity amin'ny teny tany am-boalohany dia tonga soa ianao valiny miaraka ambadika ary ny fanohanana ara-kevitra.
Ny zavatra manaraka natao dia ny famoronana ny sary an-tsary ny marika, noho izany dia nitady haneho ny hevitry ny boaty tamin'ny fomba somary abstract izahay mba hanehoana an'io hevitra io amin'ny fomba miafina.
Isaky ny miasa amin'ny sary orinasa isika dia tsy maintsy mazava ny fifandraisana amin'ny foto-kevitra ho an'ny fifandraisana mahomby kokoa, mitady fanamarinana Ho an'ny zavatra rehetra ataontsika, amin'ny famolavolana, tsy misy tokony havela ho azy. Ny fampiasana ny endrika, ny loko, ny endritsoratra dia tsy maintsy mifototra amin'ny andiana filàna hitantsika teo aloha, raha toa ka vita tsara ny asa teo aloha dia efa manana ny antsasaky ny asa vita isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Lisitry ny hevitra rehefa mamorona sary famantarana
Adobe dia mandefa ny drafitra Adobe XD maimaim-poana mba hanananao ny fitaovana famolavolana tsara indrindra
Ny fahaizan'ny tatoazy sasany amin'ny hazondamosina